22 january 2016 living
ကျန်းမာရေးနှင့်ညီသော အဆီများ ပိုစားခြင်းကြောင့် နှလုံးရောဂါ အန္တရာယ် လျှော့ချနိုင်
မကောင်းသောအဆီများအစား ကျန်းမာရေး နှင့်ညီညွတ်သော အဆီများကို အစားထိုး စားသုံးပေးခြင်းဖြင့် နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွား နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို လျှော့ချစေနိုင်ကြောင်း တာ့ဖ် တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီ များ၏ လေ့လာမှု အရ သိရသည်။
တစ်ခါတလေမှာ အသောက် အ စားများသွားလို့ နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်ပြီး အရက်နာကျသူတွေ သက်သာစေမယ့်နည်းလမ်း တချို့ကို ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
ဂေါ်ဖီထုပ်ချဉ်- အချဉ်တည်ထားတဲ့ ဂေါ်ဖီထုပ် ကို စားပေးတာဟာ
အိပ်ခန်းထဲမှာထားသင့်တဲ့ အပင် လေးတွေ
အိမ်တွင်းစိုက် အပင်တွေဟာ လေထုကိုသန့်စင် ပေးပြီး အောက်ဆီ ဂျင်ပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက် လူသားအကျိုးပြုပေးကြပါတယ်။ စိတ်ကို လန်း ဆန်းပေါ့ပါးစေပြီး ကောင်းကောင်းအိပ် ပျော်စေ ဖို့ ကူညီပေးနိုင်တဲ့ အပင်လေးတွေ ရှိတာကြောင့် သိထားဖို့ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။
copyrights © . Department of Medical Services.
Go to Ministry of Health Website